ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ပန်ကြားချက် | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
June 1, 2007, 5:39 am Filed under: Strongly Suggestion လင်း မိသားစုကိစ္စတွေရယ် ၊ ကိုယ့်ကိစ္စတွေရယ်နဲ့ အလုပ်တအားရှုပ်နေလို့ ဘလော့ခ်ကို ဘာမှ မရေးနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရလို့ပါ .. ။ မောင်နှမတွေအားလုံးတောင်းဆိုထားတာတွေကို တခုချင်း ဖြေးဖြေးလုပ်ပေးသွားမှာပါ .. ။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများက နအဖရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပြည်သူပြည်သားတွေ ပိုသိလာစေဖို့ ပန်ကြားချက်စာကို အားလုံးထပ်သိစေဖို့ပဲ အခုလောလောဆယ် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ် .. ။ အခြားအကြောင်းတွေနဲ့ ရေးချင်တာတွေကိုတော့ မဝေးသော ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ ဆက်လက်ရေးပေးသွားမှာပါ.. ။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ပန်ကြားချက်
(ပြည်ခိုင်ဖြိုး) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရှိ အဆင့်ဆင့်သော အဖွဲ့ဝင်များအား မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားချက် ရက်စွဲ။ ။ ၂၉ ရက်၊ မေလ၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။ ညီ၊အကို၊မောင်နှမများခင်ဗျား အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာ ဒီကနေ့ဆိုရင် အင်မတန်မှ တုန်လှုပ်ချောက်ခြားဖွယ်ရာ အခြေအနေဆိုးကြီးကို ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ – သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာ လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက် – မိဘတွေဟာ ချစ်လှစွာသော သားသမီးတွေအတွက် – ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမတွေဟာ သူတို့တပည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် – ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ညီတော်နောင်တော်တွေအတွက် – ရဟန်၊သံဃာတော်တွေဟာ ဒကာဒကာမတွေအတွက် ပူပင်သောကတွေနဲ့ ရတက်မအေးဖြစ်နေကြရပြီး သောကမီး၊ ဒေါသမီးတွေ တောက်လောင်စပြုလာနေပြီ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲသည်လို ပြည်သူတွေ သောကမီး၊ ဒေါသမီးတွေတောက်လောင်လာအောင်၊ ကာယကံမြောက် ကျူးလွန် စေခိုင်းနေသူတွေဟာ လက်တဆုပ်စာ စစ်အာဏာပိုင်တွေသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ——- ကျောင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲတွေ၊ ချီတက်ပွဲတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေ၊ စီတန်းလမ်းလျှောက်ပွဲတွေကို မငြိမ်းမချမ်းဖြစ်အောင် လုပ်လိုကြတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် မလုပ်ရဲတဲ့ အတွက် သင်တို့ကို သွေးထိုးမြှောက်ပင့်ပေးပြီး အဓမ္မလုပ်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်။ သင်တို့ကို အဓမ္မ ဆင့်ခေါ်အသုံးချပြီး ပြည်သူ – ပြည်သူချင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားအောင် ရန်တိုက်သွေးခွဲနေတာဖြစ်တယ်။ အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ်ခိုင်းပြီး၊ ကြက်နှစ်ကောင်မောမှ တပြိုင်တည်း ရိုက်သတ်စားမယ်ဆိုတဲ့ အင်မတန်မှ ယုတ်မာပက်စက်တဲ့အကြံအစီဖြစ်တယ်။ ညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ သူတို့ အတင်း အဓမ္မ အာဏာပြပြီး ၀င်ခိုင်းခဲ့လို့ သင်တို့တတွေဟာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ထဲကို ၀င်ခဲ့ကြရပြီးပြီ။ အခုတခါ အာဏာပြပြီး သင်တို့ကို လူသတ်ကောင်ဖြစ်အောင်၊ တရားခံဖြစ်အောင် တွန်းပို့နေကြပြန်ပြီဖြစ်တယ်။ ညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ – သင်တို့သည်လည်း ပြည်သူလူထုထဲက ပေါက်ဖွားလာသည့် ပြည်သူတွေဘဲ မဟုတ်လော။ – သင်တို့သည်လည်း မိနှင့်ဖနှင့်၊ သားနှင့်မယားနှင့်၊ ညီနှင့်အကိုနှင့်၊ မောင်နှင့်နှမနှင့် အေးအေးချမ်းချမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နေထိုင်လိုကြသည်ဘဲ မဟုတ်လော။ – သင်တို့သည်လည်း တရားမျှတမှု၊ လွပ်လပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုလားကြကုန်သည်ဘဲ မဟုတ်လော။ ညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ – ရပ်တန်းကရပ်ကြကုန်လော့။ – သူတို့ခိုင်းသမျှုငြင်းဆန်ကြကုန်လော့။ – မတရားသည့်အမိန့်အာဏာဟူသမျှဖီဆန်ကြကုန်လော့။ (ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ)
thanks for post DANDON STUDENTS’ Statements for inside burmese peopel. haha another one. my dearly is very busy for personal —. wht do u think readers about ” linlet’s personal timel. —GUESShal hal sincerlyJIMMY
June 1, 2007 @ 5:28 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI